अनुहार हेर्दैमा परिचय खुल्छ र? :: नवराज न्यौपाने 'मौन' :: Setopati
अनुहार हेर्दैमा परिचय खुल्छ र?
सामान्यत: हामी कुनै पनि मानिसको अनुहार हेरेर, भेषभूषा तथा पहिरन नियालेर र बोलीचालीको लवज सुनेर उक्त मानिसको बारेमा धेरै कुरा अड्कल काट्ने गर्छौं।
उक्त मानिस हिमाल, पहाड र तराई कहाँको बासिन्दा हो, कुन जातजातिको हो र उसको उमेर कति हो आदि कुरा हामी उसको सामीप्यमा आएर नजरअन्दाज गर्ने गर्छौं। तर सबैको बारेमा गरिएको अड्कल मिल्दो भने हुँदैन।
म स्वयं यसको अपवादमा पर्ने व्यक्ति हुँ। अर्थात् मेरो नामथर, घर ठेगाना र उमेर सम्बन्धमा वास्तविकता अड्कल गरेअनुसार कत्ति पनि मेल खाँदैन। धेरै ठाउँमा मैले आफ्नो परिचय दिँदा मानिसहरू प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन् कि तपाईं सरासर झूट बोलिरहनुभएको छ।
म पहाडको मान्छे। तर झलक्क हेर्दा सबैजसो मान्छेले मलाई तराईको मान्छे हुनुपर्छ भनी अड्कल काट्दा रहेछन्।
काठमाडौं-पोखरामा क्याम्पस पढ्दादेखि नौ वटा हिमाली जिल्लामा जागिर खाँदासम्म सबै ठाउँमा मलाई 'मधेसी' व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरिरहे। कतिले त तपाईंले नेपाली राम्ररी बुझ्नुहुँदो रहेनछ भनेर हिन्दीमा समेत बोल्ने गर्थे।
म तराईको मान्छे होइन ,पहाडको हुँ भनेर भन्दा पनि कति मान्छेले विश्वास नगरी रिसाउँदै झूट बोलेको आरोप लगाउँथे। कोही-कोहीले पहाडको मान्छे भनी विश्वास गरे पनि तपाईं बाहुन क्षेत्री त होइन? कि नेवार कि दलित हुनुपर्छ भनी अड्डी लिन्थे।
तिहारलगत्तै जिल्ला फर्कंदा स्थानीय बासिन्दालगायत स्थानीय कर्मचारीले समेत भन्ने गर्थे - तपाईं त छठ नमनाइ आउनुभएछ नि!
म मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिन्थें -छठ यतै मनाउनु पर्ला।
कालो वर्णको र 'मधेसी ब्राण्ड' अनुहार भएकोले मैले पहाडी तथा हिमाली भेगमा धेरै अपमान पनि भोगेको छु। सानातिना काम गर्ने मधेसी मूलका व्यक्तिहरूलाई 'धोती' भनेर अलि घटिया व्यवहार गरेको मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु।
मेरो नामथर र ठेगानामा मात्र होइन, मेरो उमेर पनि अड्कल गरेभन्दा फरक रहेको छ।
भर्खर ५० वर्ष काटेको म दुनियाँको नजरमा ६५-७० वर्षको जस्तो देखिने रहेछु। मेरै उमेरका मानिसहरूले मलाई बुवा भनेर सम्बोधन गरेको देख्दा मलाई अप्ठ्यारो लागेर आउँछ।
६० वर्ष नाघेकाहरूले पनि मलाई दाइ भनेर सम्बोधन गरेको देख्दा मन कुँडिएर आउँछ।
मैले आफ्नो सही उमेर बताउँदा पनि फटाहाको उपाधि पाउने रहेछु।
सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि सबैले मलाई जेष्ठ नागरिकको सिटमा बस्न अनुरोध गर्छन्। तर म अरू मानिसलाई उठाएर बस्न भने चाहन्नँ। बैंकमा जाँदा पनि गार्डले सिनियर सिटिजन्सको टोकन दिन्छन्। मैले ५०-५५ वर्ष माथिका नागरिकलाई दाइ-दिदी भनेर सम्बोधन गर्दा पनि खप्की खानुपर्छ -यस्तो बुढो मान्छेले मलाई दिदी भन्ने ? यस्तो बुढो मान्छेले मलाई दाइ भन्ने ?
मानिसहरूले मेरो बारेमा जे-जस्तो कुरा गरे पनि मेरो परिचय कसैले फेरेर फेरिने छैन। म पहिले जो थिएँ, उही मान्छे हुँँ र उही रहने छु।
तपाईं पत्याउनुस् वा नपत्याउनुस्, मेरो वास्तविक परिचय यत्ति हो - नाम :- नवराज न्यौपाने 'मौन'। ठेगाना :- चुँदी ,तनहुँ । उमेर:५१ वर्ष।
कसैले मिल्यो मिलेन भने पनि मसँग सबुद प्रमाण साक्षी छन्। अस्तु!
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २४, २०७८, ०६:०१:००